Plezi One: Fitaovana maimaim-poana hamoronana fitarihana miaraka amin'ny tranokalanao B2B | Martech Zone
Taorian'ny volana maromaro nanaovana izany, Plezi, Mpanome rindrambaiko automatique momba ny varotra SaaS, dia manomboka ny vokatra vaovao amin'ny beta ho an'ny daholobe, Plezi One. Ity fitaovana maimaim-poana sy intuitive ity dia manampy ny orinasa B2B madinika sy salantsalany hanova ny tranokalan'ny orinasa ho lasa tranokala mpitarika. Fantaro ny fomba fiasany eto ambany.
Amin'izao fotoana izao, 69% amin'ireo orinasa manana tranokala dia miezaka mampivelatra ny fahitany amin'ny alàlan'ny fantsona isan-karazany toy ny dokam-barotra na tambajotra sosialy. Na izany aza, ny 60% amin'izy ireo dia tsy manana vina momba ny habetsahan'ny vola azony amin'ny alàlan'ny tranonkala.
Manoloana ny fahasarotan'ny paikady ara-barotra nomerika isan-karazany, ny mpitantana dia mila zavatra tsotra roa: mba hahatakarana ny zava-mitranga ao amin'ny tranokalany sy ny famoronana fitarihana amin'ny tranonkala.
Taorian'ny 5 taona nanohanana orinasa maherin'ny 400 miaraka amin'ny rindrambaiko automation marketing rehetra, Plezi dia maniry ny handeha lavitra kokoa amin'ny famoahana ny Plezi One. Ny tanjona lehibe amin'ity rindrambaiko maimaim-poana ity dia ny hanova ny tranonkala rehetra ho lasa mpamokatra fitarihana, mba hanohanana orinasa maro kokoa manomboka amin'ny fotoana nanombohany.
Fitaovana Tsotra Hanova ny Tranonkalanao Ho Mpamokatra Lead
Plezi One dia manamora ny famoronana fitarihana mahafeno fepetra amin'ny alàlan'ny fampidirana am-pilaminana ireo endrika misy hafatra mandeha ho azy amin'ny tranokalan'ny orinasa. Izany koa dia ahafahanao mahazo izay ataon'ny fitarihana tsirairay ao amin'ny tranokala, ary ny fomba fiovany isan-kerinandro miaraka amin'ny dashboard madio.
Ity dia zavatra tokony hodinihina raha manomboka ny dianao nomerika ianao ary mbola mitady vahaolana tsara indrindra ho an'ny famokarana fitarihana sy ny fanaraha-maso tranonkala mitambatra. Ny tombony lehibe amin'ny Plezi One dia ny hoe tsy mila manana fahalalana ara-teknika ianao vao mampiasa izany na hanombohana ny varotrao. Toy izao ny fomba fiasany.
Atombohy ny paikadin'ny mpitarika anao
Ny endrika no fomba mety sy mivantana indrindra hamadihana mpitsidika tsy mitonona anarana ho mpitarika mahay amin'ny tranokala iray. Ary be dia be ny fahafahana hahazo mpitsidika hameno taratasy, na hifandray, hangataka teny nalaina, na fidirana amin'ny taratasy fotsy, gazety na webinar.
On Plezi One, vita ny famoronana endrika raha vao manampy loharano vaovao ianao. Plezi dia manolotra modely isan-karazany, miaraka amin'ireo fanontaniana amboarina amin'ny karazana endrika isan-karazany mba hifanaraka amin'ny dingan'ny tsingerin'ny fividianana (ary ataovy izay hahazoanao antoka fa tsy hanelingelina mpitsidika iray izay te hisoratra anarana fotsiny amin'ny gazetinao amin'ny fanontaniana ianao).
Raha te hamorona môdelin'ny endrikao manokana ianao dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra ary misafidy ny saha tianao hampiasaina. Azonao atao ny mampifanaraka ny endrika mifanaraka amin'ny famolavolana tranokalanao. Azonao atao koa ny mampifanaraka ny hafatry ny fanekenao amin'ny GDPR. Rehefa avy namorona môdely ianao dia azonao atao ny manampy azy ireo amin'ny tranokalanao amin'ny tsindry iray!
Azonao atao ihany koa ny mamorona mailaka fanaraha-maso izay alefa ho azy ho an'ny olona nameno ny taratasy, na handefa azy ireo loharano nangatahana na hanome toky azy ireo fa voakarakara ny fangatahan'izy ireo. Amin'ny fampiasana saha marani-tsaina, azonao atao mihitsy aza ny manamboatra ireo mailaka ireo amin'ny anaran'ny olona iray na ny loharano nampidirina ho azy.
Fantaro ny fitondran-tenan'ny mpihaino ary mahafeno fepetra ho mpitarika
Ankehitriny rehefa manomboka mameno ny taratasinao ny mpitsidika anao, ahoana no fomba ampiasanao ny mombamomba azy? Eto no misy ny tabilao Contacts an'ny Plezi One, izay ahitanao ny olona rehetra nanome anao ny mombamomba azy. Ho an'ny fifandraisana tsirairay dia hahita zavatra maromaro ianao izay hanampy anao amin'ny fomba manokana.:
Ny hetsika sy ny tantaran'ny mpitsidika ao anatin'izany:
Nofenoina ny taratasy
Pejy hita ao amin'ny tranokalanao
Ny fantsona nitondra azy ireo tamin'ny tranokalanao.
Ny antsipirian'ny prospect. nohavaozina raha vao manome vaovao vaovao amin'ny fifandraisana amin'ny atiny hafa ny fifandraisana:
Anarana voalohany sy anarana farany
Ity tabilao ity dia azo ampiasaina ho sehatra fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa kely (CRM) raha mbola tsy manana ianao. Ny ekipan'ny varotrao dia afaka manampy naoty isaky ny rakitsoratra mba hanaraha-maso ny fivoaran'ny fifandraisana amin'ny vinavinao.
Azonao atao ny manamarina ny fifandraisan'ny mpihaino rehetra amin'ny tranokalanao, satria voarakitra an-tsoratra ireo fifandraisana ireo. Hanana hevitra tsara kokoa ianao momba izay tadiavin'ny mpihaino anao sy izay atiny mety hahaliana azy.
Ny script fanaraha-maso dia hampiseho aminao hoe avy aiza ny vinavinao, ny zavatra ataony ao amin'ny tranokalanao ary rehefa miverina izy ireo. Ity dia endri-javatra mahasoa satria manome hevitra anao alohan'ny hanombohanao resaka amin'izy ireo. Ny Analytics dia afaka manampy anao hanara-maso sy hahatakatra ny vinavinao.
Diniho ny fahombiazan'ny paikadinao
Ny fizarana Report dia ahafahanao mahita ny antontan'isa momba ny hetsika ara-barotra ataonao indray mandeha. Plezi dia nisafidy ny hifantoka amin'ny angon-drakitra tena ilaina amin'ny fahatakarana ny zava-bitan'ny tranokalanao sy ny paikadin'ny varotrao, fa tsy mijanona amin'ny metrika mampisafotofoto sy tsy azo esorina. Fomba iray tsara ho an'ny mpitantana na mpivarotra iray mba hifehezana ny marketing dizitaly!
Eto ianao dia afaka mahita ny zava-mitranga rehetra ao amin'ny tranokalanao mandritra ny fe-potoana iray, miaraka amin'ny isan'ny mpitsidika sy ny fitarihana ara-barotra, ary koa ny sarin'ny fantson'ny fiovam-po hahitanao ny isan'ny mpanjifa nentinao tamin'ny varotrao. Optimization motera fikarohana (SEO) fizarana dia ahafahanao mahita ny isan'ny teny fanalahidy napetrakao sy ny toerana misy anao.
Araka ny hitanao, Plezi One Mifanohitra amin'ireo vahaolana sarotra be loatra (ary matetika tsy ampiasaina) amin'ny fanolorana traikefa mivaingana ho an'ny fitaovana iray izay ivon'ny paikadin'ny orinasa iray.
Manolotra traikefa intuitive izy io mba ahafahan'ny orinasa tsy mbola manana ekipa voatokana hanomboka hahatakatra ny voanjo sy ny bolts amin'ny marketing dizitaly ary manomboka mamorona fitarihana amin'ny alàlan'ny tranokalany. Mora apetraka, mora ampiasaina ary maimaim-poana 100%! Liana amin'ny fidirana aloha amin'ny Plezi One?
Misoratra anarana amin'ny Plezi One maimaimpoana eto!
Tags: b2bb2b mitarika taranakaCRMfamoronana endrikaendrika môdelyfitaovana endrikafitarihana firakamitarika gentaratrafmfahaizana mitarikapleziplezy irayfahaiza-mitarikahetsika ataon'ny mpitsidika
Paul-Louis no mpitantana ny fifamoivoizana ao Plezi, rindrambaiko automation marketing B2B ho an'ny mpivarotra.